Libaaxyadu waxay galaan wareega 4e - WAA LA DILAY
ACCUEIL » kale Libaaxyada ayaa gala wareega u qalmida 4
Libaaxyada ayaa gala wareega u qalmida 4
In kasta oo guuldaradii ay kala kulantay doorashadii DRC, Indomitable Lionesses ee Cameroon waxay u gudubtaa wareegga wareega ee tartamada haweenka Afrika ee Ciyaaraha Olombikada Tokyo2020.
Nchout Njoya Ajara ayaa badbaadiyay xulka Cameroon daqiiqadii 80th. In kasta oo Indomitable Lionesses loo hogaaminayay goolasha 2 ilaa 0 isla markaana loogu hanjabay u qalmitaan la'aan, weeraryahanka Valerenga ee Noorway wuxuu awood u yeeshay inuu ka faa'ideysto soo kabashada weyn ee Alexandra TAKOUNDA oo ka socota Eclair Football Girls SA'A markaa madax fiican ayaa lasaaraa, si loo khiyaaneeyo feejignaanta feejignaanta ee dadka reer Koorgo ee NGOY MUDIMBI Fideline, sidaas darteed loo dajinayo dhamaan rajada Leopards inay arkaan wareega xiga.
Kulanku si dhib yar uma uusan bilaabin Indomitable Lionesses kuwaas oo, sida ay sheegtay Raïssa FEUDJIO shirkii jaraa'id ee ciyaarta ka hor, ay aadi doonaan Kinshasa "si ay u dhammaystiraan dhaawaca dhaawaca Yaoundé". Libaaxyada Indomablees ah ee luminta astaanta astaantooda, Michaela ABAM, oo aan wali go'aan laga gaarin, Ajara, ku hareereysan, khadka dhexe oo hufan. Koongareesku waxay ka faa'iideysaneysaa cilado-darrooyinkaan, ilaa daqiiqaddii 15ème ee Isabelle Diakese waxay ka faa'iideysatay bixitaan halis ah oo albaabka Cameroonian Annette NGO NDOM si loo furo natiijada. Kooxda reer Congo ayaa heleysa kalsooni, in kasta oo ay u dhowdahay faaruqnimada garoonkii sheekha ee Martyrs. Hadaf keliya ayaa hadda ka soocay iyaga oo ka dhigaya libaaxyada una keenaya ku dhowaad u soo bixidda. Kalsoonida ayaa la isku daraa daqiiqaddii 38th, markii kubad uu soo qaaday Marlène KSAJ YAV uu mar kale la yaabtay goolhayaha reer Cameroon isla markaana uu ka helay salka shabaqa shabagyada. Cabsida ayaa isbeddelaysa labada koox, labada koox ayaa hada isku xiran, labo gool ayaa laga dhaliyay gurigooda. Labada dhinacba goolal la'aan, waqti dheeri ah ayaa la arkaa, ama xitaa darbooyin ayaa lagaaga golleeyahay go'aaminta labada koox.
Adjara ayaa leh "Nutched"
Waqti badhkiis, tilmaamaha ayaa isbedelaya. Libaaxyadu waa inay guuleystaan. Oo waxay soo bandhigaan isla marka ay dib ugu soo noqdaan cawska. Ajara waxyar ayey u kacdaa, ilaalinta iyo wareejinta rasaasta ayaa la xoojiyay. Tababare Alain Djeumfa ayaa sidoo kale sameynaya bedello cadeyn doona wax ku ool ah. Cathérine BENGONO ayaa bedelay kabtanka Augustine Ejangue digniin, xawaaraha Henriette Michelle AKABA ee booska Michaela ABAM ayaa meel aad u yar u taga TAKOUNDA Engolo. Libaaxyadu waxay dib u helaan kalsoonidii. Ciyaarta 62ème Nchout Njoya Ajara ayaa laga badiyay labo dhibic markii ugu horeysay oo uu ka horyimaado goolhayaha reer Congo waxaana uu seegayaa falkiisa. Laakiin 80ème, libaaxa ayaa ka falceliya. Dib u soo kabashada wanaagsan ee TAkounda, AJARA madaxa ayaa u dirta kubbadda hoosteeda shabagyada. DRC 2-1 Cameroon. Lionesses way lumisay, laakiin waxay gaartaa wareega 90-aad ee 4 iyada oo uga mahadcelineysa goolka Ajara ee banaanka laga dhaliyay.
Ciyaarihii kale ee 3-day, Ivory Coast ayaa ciribtirtay Nigeria, Kenya ayaa ka saartay Ghana, Zambia ayaa ka takhalusay Botswana. Cameroon waxay kula kulmi doontaa Ivory Coast gudaha iyo banaanka 04 iyo 12 bisha soo socota ee November si ay u galaan lugta 5th. Xusuusin ahaan, guuleystaha tartankan wuxuu Afrika u matali doonaa Toyo 2020 Ciyaaraha Olombikada. Afrika waxay heli kartaa booska labaad, hadii kan labaad ee tartanku ka adkaado CHILE.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore http://www.crtv.cm/2019/10/tokyo2020-les-lionnes-accedent-au-4e-tour-eliminatoire/
Horizon 2020: Midowga yurub waxay bilawday dadaal ay ku maalgalineyso cilmi baarista Cameroon
#CmrDialogue: su'aasha labo dhalasho